Mayelana NATHI - Vallow Electric Technology (Shanghai) Co., Ltd.
IVarlot Electrical Technology (Shanghai) Co, Ltd.
Ikhwalithi iyisevisi yempilo injongo Ukwethembeka Phakade
IVarlot Electrical Technology (Shanghai) Co, Ltd. ibhizinisi lobuchwepheshe obuphezulu elivunyelwe futhi labhaliswa yiminyango kahulumeni efanele. Inkampani yethu yinkampani enesikweletu esilinganiselwe ehlanganisa ukusatshalaliswa, izinsizakalo ezenziwa ngabaningi nezamabhizinisi, kanye nozakwethu wesikhathi eside wabasabalalisi beqembu lomkhakha wedijithali lakwa-Siemens (China).
Le nkampani ihambisa ikakhulukazi le mikhiqizo yakwa-Siemens elandelayo: Isilawuli esingahleleka se-PLC, i-inverter, i-servo control kanye nemikhiqizo yokushayela, i-AC servo motor, isikhombimsebenzisi somshini womuntu kanye nesikrini sokuthinta, imikhiqizo yamandla we-low-voltage kanye neyokugcina amandla, imikhiqizo yokulawula izimoto kanye nemikhiqizo yokuvikela, amandla ezimboni ukuphakela, umshini wokushintshana we-Ethernet wezimboni, njll. Ngesikhathi esifanayo, sibuye sithengise i-abb, iSchneider, i-Omron, iMitsubishi neminye imikhiqizo. Inkampani yethu isungule ubudlelwane obuhle besikhathi eside bokusebenzisana namabhizinisi amaningi anenqwaba yamandla namandla wezobuchwepheshe, amanani entengo afanele kanye nensizakalo enhle kakhulu yokuthengisa ngemuva. Samukela ngobuqotho wonke amakhasimende ukuthi avakashele, aphenye futhi axoxisane ngebhizinisi.
"Umlingani ohambisanayo we-Siemens (China) Digital Industry Group"
"Amandla okucwaninga nentuthuko aqinile"
- I-Siemens igxile ku-R & D yomkhakha wephothifoliyo womkhiqizo wezokuxhumana wezimboni kufaka phakathi izixazululo zezokuphepha zemininingwane ye-5G yezimboni nezimboni, okuvumela ukusebenzisana okusebenzayo ekukhiqizeni izimboni
"Ukuhlinzekwa ngokwanele kohlelo lwe-CNC nezingxenye zokungcebeleka, intengo enengqondo nekhethwayo, isevisi enhle ngemuva kokuthengisa"
Isungulwe ngo-1847, i-Siemens AG ingumholi womhlaba wonke emkhakheni wobunjiniyela kagesi nobuchwepheshe be-elekthronikhi.Selokhu yangena eChina ngo-1872, abakwaS Siemens bebelokhu besekela intuthuko yaseChina ngobuchwepheshe obusha, izixazululo eziphakeme nemikhiqizo iminyaka engaphezu kwengu-140, futhi isungule isikhundla esiphambili emakethe yaseChina ngekhwalithi evelele nethembekile, ehola impumelelo yezobuchwepheshe nokuphishekela okungapheli emisha.
IVarlot isekela ukwenziwa kwedijithali kwalo lonke uchungechunge lwenani, oludala ukuncintisana okusimeme kwebhizinisi ngezixazululo zokuphela kokuphela kusuka ekuhlolweni, ukubonisana nokuqaliswa nokusebenza kwezinsizakalo. In inqubo yezimboni, kufaka phakathi amakhemikhali, ezemithi, insimbi nensimbi, ukudla nesiphuzo, iVarlot isiza ibhizinisi ukufeza ukusebenza okuthe xaxa, okuqondile nokunembile. Ngokuqonda okungcono kwemboni, i-Varlot isiza amakhasimende ukukhulisa ukukhiqiza nokusebenza kahle, aqaphele ukukhiqizwa okuhlakaniphile futhi athuthukise ukuncintisana.
Isibonisi samandla okubonisa
-Uphenyo nokwesekwa kokubonisana.
-One-to-one yokuthengisa unjiniyela service technical.
-Hot-line yokuthengisa unjiniyela service technical.
-Ukuhlola Izinsiza kusebenza zokuqeqesha
-Ukufaka nokulungisa inkinga ye-Troubleshoot;
Ukuvuselelwa kwesondlo nokwenza ngcono;
-Iwaranti yonyaka owodwa: Nikeza ukwesekwa kwezobuchwepheshe mahhala yonke impilo yemikhiqizo.
-Kugcina impilo yonke ukuxhumana namakhasimende, thola impendulo ngokusetshenziswa kwemishini bese wenza i-
Ikhwalithi yemikhiqizo iyaqhubeka iphelelisiwe.